iRoot, anyị na-akụziri gị otu esi gbanye gam akporo na-enweghị PC | Gam akporosis
Pablo Aparicio | | Gam akporo Root, APK, Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ nwere oke ihe ọmụma banyere ngwanrọ, mgbe anyị zụrụ ekwentị ọ bụla ma ọ bụ mbadamba, ihe ọ bụla akara ya, anyị na-enwekarị ajụjụ: wepu ihe mgbochi niile iji nweta nnwere onwe ka ukwuu ma ọ bụ hapụ ya dị ka ọ dị ma ghara ime ka onwe anyị sie ike. Na gam akporo, iwepu ihe mgbochi a maara dika Rooting na nke a anyi ga akowa Esi mgbọrọgwụ gam akporo na iRoot, otu n'ime ngwaọrụ anyị nwere ike iji ozugbo site na ngwaọrụ na enweghị dabere na kọmputa.
N'aka nke ọzọ, anyị chọkwara ịkọwa ntakịrị karịa ihe ọ pụtara inwe Mgbọrọgwụ ohere na ngwaọrụ gam akporo anyị ma anyị ga-anwa ịza ajụjụ ndị ọzọ anyị maara ọtụtụ ndị ọrụ na-ajụ, dịka ma ọ bụrụ na akwụkwọ ikike ahụ furu efu n'ihi ịgbanye ngwaọrụ ahụ.
1 Kedu ihe bụ Root na gam akporo?
2 Nwere ike ịgbanye ngwaọrụ gam akporo na-enweghị PC?
3 Ngwa iji kpochapụ gam akporo ma ọ bụ mbadamba
4 Esi mgbọrọgwụ mobile na iRoot
5 Ọ na-efunahụ m ikike na ngwaọrụ gam akporo m ma ọ bụrụ na m gbanye ya?
Kedu ihe bụ Root na gam akporo?
You nwere ike ịsị na ịbụ Root na gam akporo nwere njikwa ngwaọrụ zuru ezu. Ọ bụrụ na ị bụ ndị egwuregwu, ị nwere ike iji tụnyere ịbụ onye mgbọrọgwụ na gam akporo na ọnọdụ Chineke nke a na-egbughị anyị ma anyị nwere ikike pụrụ iche nke, dịka ọmụmaatụ, ga-enye anyị ohere ịgafe mgbidi na ọbụghị.
Enwere ngwa ndị chọrọ ụfọdụ ikikere pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ngwa ejiri iji weghachite okwuntughe maka netwọ Wi-Fi nwere ike nyochaa netwọkụ naanị ma ọ bụrụ na agbanye mgbọrọgwụ. Enwekwara ngwa pụrụ iche dị ka Cerberus na Titanum Backup nke na-enweghị ike ịrụ ọrụ ha ma ọ bụrụ na anyị ewepụghị mgbochi nke ngwaọrụ gam akporo ọ bụla gụnyere site na igbe ahụ.
Na mgbakwunye, ịbụ mgbọrọgwụ anyị nwekwara ike hazie ngwaọrụ kachasị, nke nwere ike ikwe ka anyị kpochapụ ngwa arụnyere na ndabara ma ọ bụ kpochapụ oyi akwa nhazi nke ika.
Ihe ọghọm ya bụ na ọ bụ agụba nwere ihu abụọ yana, ọ bụrụ na anyị agbanye mgbọrọgwụ na ngwaọrụ anyị ma anyị akpacharaghị anya, anyị nwere ike ịgba ọsọ ojiji ngwa site na nke a ka anyị ga-enye ya ikike ime ihe niile. Ọ bụrụ na anyị abụghị mgbọrọgwụ, ọ bụrụ na anyị na-agba ọsọ ụdị ngwa a, ọ gaghị enwe ike ịme ụfọdụ omume.
Nwere ike ịgbanye ngwaọrụ gam akporo na-enweghị PC?
Ee n'ezie. Ajụjụ a ga - eme ka anyị nwekwuo uche maka afọ 2010-2011, mgbe gam akporo dị na nwata ma enweghị ọtụtụ ngwa dị. Ugbua na 2016 anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ga - eme ka anyị gbanye mgbọrọgwụ gam akporo anyị na - enweghị dabere na PC. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi eme ya na iRoot, mana anyị ga-ekwukwa ntakịrị banyere ngwa ndị ọzọ iji nweta mgbọrọgwụ na gam akporo anyị. Offọdụ n'ime ha, ikekwe kachasị mma, chọrọ iji kọmputa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ, ebe a anyị na-egosi gị esi akpata android enweghị PC na mgbọrọgwụ Master.
Ngwa iji kpochapụ gam akporo ma ọ bụ mbadamba
N'ime ọtụtụ ngwa dị maka mgbọrọgwụ na gam akporoM ga-mata ndị na-esonụ:
Kingo mgbọrọgwụ. Nwere ike ịsị na Kingo ROOT bụ ụdị yiri ya ma adighi arụ ọrụ karịa VRoot. Dị ka VRoot, ọ na-enye gị ohere ịme ụzọ azụ, nke a maara dị ka unroot.
FramaRoot. Dịka ngwa nke na-achọghị kọmputa, kama ọ bụ na a na-eme usoro ahụ dum site na ngwaọrụ ahụ, ọ naghị arụ ọrụ na ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ bụ ụdị dị ka ngwaọrụ ndị gara aga, mana ọ bụkwa nhọrọ ị ga-echebara echiche. Na EGO Have nwere ọkwa na-akọwa otu esi eji mgbọrọgwụ akụrụngwa gam akporo ngwaọrụ.
KingRoot. Ngwa ọzọ nke na-enye anyị ohere ịgbanye mgbọrọgwụ gam akporo na-enweghị PC. Ezubere weebụsaịtị ha nke ọma ma ha kwuo na ọ na-arụ ọrụ karịa ihe dị iche iche 100.000, mana ọ dịghị mma dịka VRoot ma ọ bụ Kingo ROOT.
Nkpọrọgwụ mgbọrọgwụ. Ọ na-arụ ọrụ iji gbanye enweghị kọmputa na gam akporosis anyị na-ede posta nwere ozi gbasara ngwa ọrụ a.
Ọtụtụ ndị ọzọ, mana ndị dị n'elu bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Esi mgbọrọgwụ mobile na iRoot
Otu n'ime nhọrọ kacha mma maka Mgbọrọgwụ gam akporo na-enweghị PC bu iRoot. Buru n'uche na ụfọdụ ngwaọrụ nwere ngwaọrụ a kapịrị ọnụ maka ha, ya mere ọ kachasị mma na okwu ndị a iji ngwaọrụ kwekọrọ. iRoot nwere nsụgharị maka PC na gam akporo ma na vidiyo na-esonụ ị nwere ngosipụta nke otu esi arụ ọrụ. Ọ bụrụ na imelitebeghị, akụrụngwa a dakọtara site na Android 2.2 gaa na nsụgharị ndị ọhụrụ. Na vidiyo anyị na-akọwa ihe a niile ntakịrị karịa mana, iji zere ọgba aghara, m ga-akọwa nkọwa nke usoro (nke m chere na ọ gaghị adị mfe) iji gbanye ngwaọrụ gam akporo na iRoot:
Ọ bụrụ na anyị enweghị nhọrọ iji wụnye ngwa site na isi mmalite ndị a na-arụ ọrụ, anyị na-aga na ntọala izugbe ma rụọ ọrụ ya.
Anyị na-ebudata iRoot site na EGO.
Anyị na-emeghe ebudatara .apk faịlụ na họrọ "Wụnye" nhọrọ.
Mgbe ị banyere, anyị ga-ahụ akara ngosi nke nwa bebi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-esote ya na bọtịnụ nke na-ekwu «Root». Anyị pịa bọtịnụ ahụ.
Anyị na-eche na, mgbe usoro ahụ gwụchara, anyị ga-agbanye ngwaọrụ anyị.
Ọ na-efunahụ m ikike na ngwaọrụ gam akporo m ma ọ bụrụ na m gbanye ya?
Ajụjụ a enweghị azịza dị mfe. N'otu aka, a na-eche na mgbe anyị mere ụdị ọrụ a na ngwaọrụ anyị, anyị na-eme Anabataghị mgbanwe site n'aka ụlọ ọrụ resịrị anyị ngwaọrụ ahụ. Na ndabere, mgbe dịrị ihe gam akporo ngwaọrụ, anyị na-atụfu akwụkwọ ikike.
Ma tiori bụghị eziokwu mgbe niile. Otu ebumnuche ụlọ ọrụ ọ bụla bụ afọ ojuju ndị ahịa. Ọ bụrụ na onye ọrụ nwere obi ụtọ na nzụta ngwaọrụ, anyị nwere ike ịtụle ịzụta ihe ọzọ nke otu ụdị ahụ n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu na ọrụ mgbe ahịa gachara, anyị nwekwara ike ịtụle ịzụta ngwaọrụ ọhụrụ nke otu ụdị ahụ n'ọdịnihu. Ndị ụlọ ọrụ mara ya ma ọ bụrụ na anyị ewetara ha ngwaọrụ mebiri emebi nke anyị gbanyere mkpọrọgwụ, ha na-echigharịkarị anya.
Ka o sina dị, ọ bụrụ n’anyị chọrọ ijide n’aka, ọ kacha mma ịghara ịgbanye ngwaọrụ anyị, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ekpebie ịghara iweghara nrụzi.
Already marala esi akpata mobile ma ọ bụ mbadamba gam akporo na iRoot ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ? Enwere onwe gị ịhapụ ahụmịhe gị na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » [APK] iRoot, otu esi gbanye Android mobile na-enweghị PC
Na galaxy m s4 ọ naghị arụ ọrụ
Zaghachi José Antonio Cabrera Botello
Ndewo, a bụ m Isaac de los santos Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na amazon ọ nwere ike ịme ma ọ bụrụ na pc agbaala ọtụtụ ụzọ mana ahụghị m android bụ 5.1.1
José Antonio Cabrera Botello, gị onwe gị achọghị ya ebe ọ bụ na ịnwere nkuzi ụfọdụ maka Galaxy S4.
Ma enweghị pc? Biko ị nwere ike ịnye m njikọ ahụ
Gbalịa inweta PC nke enyi, onye ikwu ma ọ bụ onye ị maara ma soro nkuzi ahụ iji gbanye Odin
Daalụ nke ukwuu. Echiche kacha mma
Agbalịrị m nhọrọ mgbọrọgwụ a na S3 SHV-E210L m ma enweghị mgbọrọgwụ m, dwarf na-acha akwụkwọ ndụ na-apụta ọzọ dịka ọ na-enweghị ike ime ya, ma e wezụga nke a enweghị m ike ijikọ ya na pc n'ihi na ọ nwere koodu MDM m na-eme amaghi na m na egbochi otutu ihe! 🙁 Helpp
Milton jon linenberg dijo
Ndewo, enwere m Galaxy s4 mini. Obere ihe omume a ọ baara m uru?
Zaghachi Milton Jon Linenberg
ee-enweghị pc na ọ na-aga nke zuru oke ma eme ya na 10 sekọnd
Zaghachi Victor De La Cruz Crespo
Towelroot, ndị ọrụ nke samsung galaxy s4, mini, wdg, nwere ike ịchọ ngwa a na google, budata ma wụnye, ọ bụ naanị okwu mmeghe ya na ịpị naanị bọtịnụ o nwere, ọ dị m ka ọ na - ekwu mee ka mmiri zoo ... Na mgbọrọgwụ na-enweghị na-esite na PC, ọ bụ ezigbo ntụkwasị obi, e kere ya site na geohot, nke na-ahụ maka ịme ngwa na Jailbreak iOS ngwaọrụ.
Daalụ, gịnị ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na LG Pro Lite Dual D686
Daalụ, ọ na-arụ ọrụ na LG Pro Lite Dual D686.
Ọ na-arụ ọrụ maka galaxy tab gt-p1010 ??
Ọ bụrụ na m gbanwee obi m, enwere m ike iwepu otu ngwa ahụ dị ka framaroot?
Maara ma ọ dị irè maka sony xperia z3 tablet? Daalụ
Enyocha, abaghị uru sony xperia z3 tablet na gam akporo 4.4.4
arụ ọrụ maka ọkụ ọkụ hd
Nnọọ. Ọ bara uru maka 2? Enwere m rom na Bekee dị ka ihe ngwọta maka ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ mgbe emechara mgbọrọgwụ site na Odin ihe karịrị otu afọ gara aga. I meela nke oma na buk, bq edison 2 zuru m oke, ejiri m ya ebe obu na enweghim pc.
Ihe kachasị mma bụ na ịnwale ya gwa anyị n'onwe gị. Ọ bụrụ na ngwa ahụ adabaghị na akara na akara nke akara gị, ọ gaghị eme ihe ọ bụla ma ọlị.
Dịkwa mma. Maka m mara nke 2 abaghị uru, «dara ada», agbanyeghị m na-ewere ohere ikele gị ọzọ maka ọrụ gị na nlebara anya gị. Ekele ma na-alụ ọgụ, n'ọnọdụ m ka m nyere ọgụ n'ihu maka ọnwụ na bq ruo mgbe m zutere blog gị
Adịghị akpata mgbọrọgwụ z1
kedu ihe ọ bụ enyi !!! Youchọtala ụzọ ọ bụla iji gbanye ekwentị gị?
Zaghachi ronald gutierrez villanueva
Onwere onye maara ka esi gbanye alcatel ot arụsị 2s (6040a)? Agbalịrị m ihe niile ọbụlagodi pc na ihe ọ bụla.
Zaghachi Daniel San
Nke ahụ gafere gị maka snobs! Ọ bụrụ na ị na-eji mediocre ọnụ site na ụdị ndị na-eme igwe igwe na ngwa ndakwa nri, ị gaghị enwe ọtụtụ nsogbu iji gbanye ekwentị yana sistemụ arụmọrụ na-emeghe dị ka gam akporo Taa enwere igwe dị iche iche dịnụ, akpọrọ "China" na ndị nhazi 8, 3 na 2 Gb DDR 3 RAM, 16 na 32 Gb ROMS, ngosipụta HD dị elu na ọgwụgwọ Gorilla Glass nke nha niile, igwefoto 13 na ihe ruru 18 Mpx, batrị ruru 5.000 mAh, SIM abụọ, yana ọtụtụ njirimara ndị ọzọ, ha niile kwesiri ka ekwenti ha dị elu, na ọnụahịa ha na-achị ọchị, jiri ezigbo mma mara mma, ezigbo ihe eji arụ ọrụ yana ezigbo mma. Ọ bara uru ileba anya na akụrụngwa site na ụdị dịka Xiaomi, Cubot, HTL, Zopo, iNew, Jiayu, Doogee na ọtụtụ ndị ọzọ nwere atụmatụ na arụmọrụ nke ọkwa kachasị elu, na ogo nke ụdị ọ bụla dị elu nke ọdịnala. ụdị, na ha niile na-esiteghị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na "bloatware" na-enweghị isi na nke na-abaghị uru ma n'ezie, ha niile nwere oke mgbọrọgwụ
Anyị anaghị agafe maka snobs (ị ghọtara na okwu ị na-eji enweghị ike ịbụ "snob"?: Ịnyịnya ibu ahụ na-ekwu maka ntị), kama ọ bụ na, na - enweghị isi na njirimara nke ị na - etinye na ngwaahịa ndị ahụ, anyị ahọrọla ụdị na ụdị nke anyị nwere n'etiti ihe ndị ọzọ maka nnweta na ntụkwasị obi.
N'aka nke ọzọ, isiokwu ebe a bụ otu ị ga-esi gbanye ekwentị mkpanaaka na mkpu ị na-atụ ụjọ enweghị ihe ọ bụla gbasara ihe a tụlere.
Kpamkpam maka a mara mma Chinese na ekwentị mkpanaaka na ezi atụmatụ m na-achọ otú mgbọrọgwụ n'ihi na ọ dịghị enweta esịtidem ebe nchekwa nke ngwaọrụ. Ọ na-enye m na enweghị m ohere n'efu n'ihi na ọ bịara ahazi ka ọ ghara iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 6gb nke nnukwu ebe nchekwa nke 8 nke o nwere.
Obere na-enweghị ịma n'amaghị.
Enwere m Cubot S308, m na-etinye usoro ihe omume ahụ na dwarf na-acha akwụkwọ ndụ na-apụta dịka o nweela mgbọrọgwụ, enwere m ngwa ọzọ iji chọpụta ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ọ na-agwa m "ngwaọrụ a enweghị ụzọ kwesịrị ekwesị." Amaliteghachila m ekwentị mkpanaka ma mgbe m gaghachitere iroot, dwarf ahụ na-apụta n'iwe, ị maara ihe m nwere ike ime na-ezighị ezi?
Galvan Montoya (ezinụlọ) dijo
ekele! ọ na-arụ ọrụ na Motorola XT605? Ọ bụrụ na m wụnye ma gbaa ọsọ .apk ma ọ dakọghị, enwere m ike inwe nsogbu? ị maara usoro ọ bụla maka motorola a? daalụ 🙂
Zaghachi Galvan Montoya (ezinụlọ)
Bruno Fuentes dijo
lg g2 mini d625 android 4.4.2 anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na iroot, ma ọ bụ na nna ukwu ma ọ bụ na towelroot. Daalụ
Zaghachi Bruno Fuentes
Ndewo, kedụ ihe ị na-ebo m iji gbanye samsumg tab 3? Ma ọ bụ na m nwere ike bugharia ya
Nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ maka samsung galaxy trend lite duos GT-S7392L? Daalụ
Zaghachi Osberto Méndez
Ihe kachasị mma bụ ịnwale ya n'onwe gị wee gwa anyị maka ya.
Ndewo, ịgbanye usoro a na-eme ekwentị m?
No Ness, usoro a anaghị agbanwe data mkpanaka gị. Naanị gị na-enye gị ikikere ikike, ọ bụ ezie na ọ naghị akpọghe bootloader
Kedu ihe m ga - eji Haier W717 m? M na - eme nkuzi niile ọ nweghị ihe na - arụ ọrụ m, kedu ihe m ga - eme?
Have meelarị Haier w717 gị? Enwere m ihe ngwọta maka gị, ejiri m nke m mee ya
Kedu ka m ga-esi gbanye ntutu m w717 ma nwalee ihe niile mana enweghị mgbọrọgwụ ọrụ
Luis, olee otu ị si gbanwee Haier w717? Enwere m otu, enweghị m ike ịme ya biko ka ị nyere m aka
ndị enyi biko abụla ihe ọjọọ .... anyị na-ata ahụhụ anyị kwesịrị inwe ike ịgbanye ntutu ntutu w717 biko nyere m aka ịhapụ m gmail na hotmail ka ị gafere m njikọ enyemaka pls (davidalarcon44@gmail.com) (davidman315qhotmail.com )
Na Elephone p5000 ya ọ rụ ọrụ ọfụma
Na a Huawei nsọpụrụ 3c kpọọ ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè.
na sony ZR (c5502) ọ na-anọ ebe ọ na-ekwu ROOTING now and DE ai anaghị eme
ekwesighi ikpetu ihe obula aka na ekwenti aka nri
Zaghachi axel antonio
Ndewo, ya na Sony xperia M (android 4.3) ọ rụọ ọrụ mana m wụnye ihe 3 ngwa ọdịnala na Chinese na amaghị m ihe ha bụ maka. Enwere ike mmadụ ịgwa m ihe ha bụ, uru ha bara ma ọ bụrụ na m nwere ike iwepụ ha ma ọ bụ na ọ bụghị?
Ndewo, m ga-achọ ịma ihe kpatara na ọ naghị arụ ọrụ na taabụ m 3 SM-T217T (Android 4.4.4), enwere ụzọ iji gbanye ya, ebe ọ bụ na mgbe m nwere ụdị 4.4.2 enwere m mgbọrọgwụ, mana m wepụrụ mgbọrọgwụ na-enwe ike imelite ya kacha ọhụrụ version na ugbu a, m na-enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla omume ma ọ bụ mgbake si mee ka ọ na-akpata ọzọ, M na-eche enyemaka gị ma ọ bụ onyinye.
Ọ na-arụ ọrụ Huawei g 525 U-00. anaghị arụ ọrụ samsung galaxy ace 2.thanks maka edemede 🙂
Apụghị m ibudata ngwa ahụ
Zaghachi ka esilame
Ọ rụrụ ọrụ na Blu 5.5s m naanị iji melite mmemme ahụ mgbe a rịọrọ m. Ọ bụ na Chinese mana ọ nwere nghọta, ekele na ekele!
Thomas Eduardo dijo
Hey, ọ naghị arụ ọrụ m na ZTE Blade G Lux, m nwara ọtụtụ ma ọ naghị arụ ọrụ.Ọ bụ gam akporo 4.4.2.Ọ nwere onye nwere ike ịkọwa m? Ma ọ bụ Enwere Usoro Maka Ngwaọrụ a? Daalụ?
Zaghachi Thomas Eduardo
Onye ọ bụla dijo
Ọ rụụrụ m ọrụ na 5 sekọnd na a Galaxy S2 wepụtara nke nwere gamel jelii bekee na anaghị m ehichapụ ọ bụla ngwa ma ọ bụ data ọ bụla (ọ bụ ezie na m mere ndabere bụrụ na ijiji) na ntọhapụ nke mobile adịghị agbaji (ọ bụ ezie na enwekwara m EMEI ọ bụrụ na).
Emeela m ya na nsụgharị ọhụrụ nke iroot apk, ọ bụ ezie na nkuzi a dị n'elu na-arụkwa ọrụ nke ọma (amaghị m ma ọ bụrụ na ụdị nsụgharị kachasị ọhụrụ karịa akara nke gara aga)
Onye ọ bụla chọrọ ịmegharị Haier W717 m nwere ụzọ m ga-esi mee ya nke a bụ email m sulbaran_1992@hotmail.com 04246457481
ụtụtụ ọma luis ezitere m gị ozi email kedu ka m ga-esi gbanye Haier w717 m aka biko
Reaper Yakumo dijo
Ndewo Enwere m nsogbu na ekwentị m bụ nke a iju ika na m nwere ike ịhụ ụzọ mgbọrọgwụ (M na-ama odomo njikọ omume na ihe ọ bụla, m gbalịrị ọtụtụ mmemme na-akpata si PC na ọ dịghịkwa), ọ bụ a Mpie xperia MP118 +
Ọ bụrụ na ị nwere ike inye m aka, m ga-enwe ekele maka ya
Zaghachi Reaper Yakumo
Ndewo, mgbe m gbanyechara s5 m arụnyere na Link2sk, isi ihe bụ na ịhapụ ohere ebe nchekwa dị na m ewepụsịrị watssapp iji budata ya na sd kaadị. Ma enweghị m ike ịwụnye ya. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Ndewo, enwere m blu Dashboard jr 4.0 k, ọ ga arụ ọrụ?
Aram Tobias dijo
Ebee ka m ga-ebudata? Ahụghị m. Biko nyere aka
Zaghachi Aram Tobias
Ọ naghị arụ ọrụ na LG G2 D800. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
K ị na-atụ m aro maka lg ph920
Ndewo m nwere moto x nke abụọ g android 5.0.1 na ha na-atụ m aro mbanye tupu aka ekele
Zaghachi na alfo
Hi, enwere m pravivi movi t amataghị nke ọma ma ọ bụrụ na ọ ga-ejere m ozi
onye jisiri ike wepu galaxy grande neo plus ?????
Cheregodi, ịmara ma sony ericcson xperia sk17a nwere ike ịgbanye mkpọrọgwụ? Achọgharịala m na enweghị ike ịchọta ihe ọ bụla: c
Enweghị m ike iji ngwa a: c na enweghị ndị ọzọ ọ na-arụ ọrụ maka m; -;
Ọ naghị arụ ọrụ na mpempe akwụkwọ Samsung galaxy tab 3.10.1 ″.
Onwere onye maara ihe kachasị mfe iji gbanye ya?
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu !!!!!!
Zaghachi Luis Torres
Ọ naghị arụ ọrụ maka m na samsung galaxy tab 3, m nwara ọtụtụ ma enweghị m ike, gịnị ka m ga - eme?
Olee otu m ga-esi gbanye samsung m
Galaxi sm j100mu anwaala ihe niile
Ma ọ naghị arụ ọrụ m ma ọ bụ android
4 .4.4 ngwa
Ọ naghị arụ ọrụ maka Sony Xperia e4 m nwere ike itinye ya kwa? Agbalịrị m ime ka mmiri zoo, ọ gaghị akwụsị
Nke m bụ mbadamba mw0821, eziokwu bụ mgbọrọgwụ na ihe niile dịkwa mma, nsogbu bụ mgbe ị na-eji link2sd ọ naghị amata nkewa nke sd m ma ọ na-ekwu na ọ naghị ahụ ikikere mgbọrọgwụ mgbe ọ bụrụ na ọ nwere ha, echere m gbanye ya iroot site na pc, ị ma ihe m ga - eme?
Kingroot, gbanye 90 pasent nke ọnụ. Download si ukara website: kingroot.com (kingroot bụ eze nke mgbọrọgwụ).
On my GT-N7100 android 4.4.2 ọ naghị arụ ọrụ
mba ... ọ naghị arụ ọrụ, n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla! Enwere m Huawei kestrel g535 ma ọ dighi chi dị n’ụwa a nwere ike ịgbanye ya, m gbalịrị nke a na ahịhịa ndị ọzọ akpọrọ v-root, e-root, towelroot na o nweghị ihe ọ bụla !!!! naanị ihe m nwetara bụ malware, adware na ihe ndị ọzọ na-akpasu iwe
Julio Paz kwuru dijo
Enwerem dongle mk802iii S (B). Enweghị m ike iwepụ ya na ihe ọ bụla! Enyemaka!!
Zaghachi Julio Paz
Na Alcatel Otu Aka:
Ọ naghị arụ ọrụ !! 🙁
Achọrọ m otu maka gam akporo 4.4.4 x m biko nye m azịza
Nnọọ! Eji m iroot maka pc wee jeere m ozi na SONY XPERIA J na LG OPTIMUS L5
Ndewo, agbalịrị m ọtụtụ ngwa na enweghị m ike iwepụ ekwentị zonda za935. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otú m, m ga-enwe ekele maka enyemaka gị.
John ikechukwu dijo
Enwere m LG ngwaọrụ kpọmkwem LG Leon na 5.1.1, kedu nke ị kwadoro?
Zaghachi John Chapman
Enwere m ike ịgbanye ekwentị m na enweghị mgbake n'ihi na achọrọ m itinye lollipop na ya mana enweghị m ike ịchọta mmemme na-enye m mgbake maka lenovo a606, enweghị m ike ịnweta rom ahụ
Zaghachi Gregory Chahuayla
Ndewo, a na m achọkwa etu esi gbanye zondaZA935, ị nwere ike inyere m aka?
Zaghachi igwe ojii
Enweghi ike ibudata APK ... ọ na - ezipụ ozi na - esote ọ bụ ezie na ọ bụ naanị oge 1st ebudatara m:
"Reached ruola ọnụ ọgụgụ kachasị nke nbudata n'efu na otu awa, biko gbalịa ọzọ n'otu elekere ma ọ bụ zụta otu n'ime ngwaahịa anyị dị adị."
Zaghachi Luis Sánchez
kedu ka m ga-esi gbanye kpakpando m na-eto eto gt-s5360l
Zaghachi Donael solis
Ngwa iji gbanye Sony Xperia M4 Aqua model E2306
Ndewo, ị maara nke ọ bụla na-arụ ọrụ maka Lenovo a916? M na-agbalị fọrọ nke nta niile na ihe ọ bụla
Agbalịrị m Apk dị iche iche na taabụ Hyundai Maestro HDT 7220 m.Enweta m na ọ gbanye mgbọrọgwụ, agbanyeghị mgbe m budara ụfọdụ mmemme ma ọ bụ ngwa, ọ dị ka enweghị m ikikere mgbọrọgwụ.
My android jupụtara Trojan virus ma chọọ inwe mgbọrọgwụ iji wepụ ya mana enweghị m ike
Rafael Nwachukwu dijo
Mgbe m ibudatara ya wee mepee ya, enwetara m njehie nyocha
Couldnye pụrụ inyere m aka?
Zaghachi Rafael andres
Onye jisiri ike gbanye samsung galaxy grand neo tinyere GT-I9060I Nyere m aka mgbọrọgwụ m ga-ekele gị nnukwu enyemaka
Julius Durden dee akwụkwọ dijo
Achoro m enyemaka, i jisiri ike mee ya emmanuel?
Zaghachi Julius Durden
Ọ bụghị brot
Mba site na nke ahụ siri ike mana ọ dị na Odin na nke ahụ nwere ike imebi ekwentị gị
Achọrọ ịntanetị iji mee mgbọrọgwụ a?
Zaghachi "El Rey-Dani"
Onye jisiri ike gbanye lenovo A3300 mbadamba
Enwere m mbadamba as01 k4.4.2a (memopad) ọ na-eme ka m ghara inwe mgbọrọgwụ, agbalịrị m pc na ihe ọ bụla. enwerem gam akporo XNUMX. Onwere onye nwere aro? Daalụ nke ukwuu
Zaghachi andres varela
Onye enwere ike ịgwa m nke APK dakọtara na ntutu ntutu W717 niile Na-ajụ!
Enwere m Samsung gala na J1 v.4.4, ị nwere ike ịgwa m ma ọ ga-arụ ọrụ na-enweghị pc n'ihi na enweghị m pc?
Onwere onye nwere ike ịgwa ma Samsung J1 dakọtara? ?
Gam akporo gam akporo dijo
Ostea ma n'ezie ị nwere ike
Zaghachi Pro gam akporo
O dakọtara maka pixi 3 yana n'asụsụ ọ bụ?
Zaghachi Luis Guzmán
Ọ bụ Guilherme Alves dijo
My Samsung grand prime 5.1.1 adịghị akpata ihe ọ bụla ọ naghị arụ ọrụ na kingroot ma ọ bụ na ihe ọ bụla desas na enweghị m antivirus ma ọ bụ ihe ọ bụla, nwekwara m ugbua gbalịrị ime na kingroot mgbe ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta na ihe ọ bụla ... 🙁 🙁
Zaghachi Guilherme Alves
Ndewo onye maara otu esi agbanye mgbọrọgwụ na 916… OCTACORE… NA ANDROID 4.4.2. DAALỤ
Enyi, ngwa na-arụ ọrụ maka Samsung galaxy ama gt-S6810E
Ihe ịtụnanya, ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla maka m, rue mgbe m rutere ebe a
Achọrọ m kwụsịrị m zte agụba 2, a na ngwa na-arụ ọrụ m
daalụ nke ukwuu na ọ rụrụ ọrụ na samsumg sch1535 m
Jea no carlos dijo
Kedu ka m ga-esi gbanwee ọnụ m
Zaghachi JeaNo carlos
Enwere m ọrụ igwe Motorla maka ngwaọrụ a?
Enwere m Samsung j5 lte na enweghị ngwa mgbọrọgwụ ya maka m, amaghị m ihe m ga - eme maka na enweghị m pc
Otu ihe ahụ na-eme na j7… .. na-enweghị pc… pfffff biko… jjj
Ndewo Pablo, enwere m mmepụta oyiri nke Galaxy S5 mgbe m mere nrụpụta ụlọ ọrụ, ọ na-anọ na ihuenyo ọcha yana okwu android ma ọ bụrụ na m banye na mgbake, ọ ka na-edozi ihe ọ bụla maka m ma e wezụga na nwa bebi gam akporo na-apụta na akara ngosi dị mma na triangle edo edo ma ọ na - ekwu na enweghị iwu ọ ga - ekwe omume na m nwere ike iwepụ ya na ntuziaka ị nyere m. Daalụ
Ọ na - enyere aka, agbalịrịla m ọtụtụ apk na enweghị m ike ịgbanye samsung galaxy grand neo plus, onye mechara nwee ihe ịga nke ọma, m ga - enwe ekele maka ya
Ndewo, lee, samsung s5 neo anaghị agbanye mgbọrọgwụ na amaghị m ihe kpatara ị ga - eji nyere m aka?
Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ma ọ bụrụ na ngwa ndị a kwesịrị ekwesị maka duos biko gwa m, Achọrọ m ịgbanye ya na-enweghị pc
jhonatan Marquina dijo
Agbalịrị m gbanye samsung gslaxy j7 m ... na ngwa niile ... na-esote nzọụkwụ site na ntinye ma enwetaghị m ihe ọ bụla ... nwere ike suydarme
Zaghachi jhonatan Marquina
UTU JCL dijo
Maka ụdị nsụgharị lollipop na ụzọ ndị a anaghị arụ ọrụ, lee mgbe ebipụtara post ahụ?
Zaghachi JORGE JCL
Ndewo, m ga-achọ ịma ma sistemụ ndị a na-arụ ọrụ na ụdị mkpanaka 6.0.1
N'ihi na ọ na-efu m
Ejiri m vroot ha tinye dị ka 1 na ekwentị m juputara na adware virus, m ka na-alụ ọgụ iji wepu ya. Ọ dabara na usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe yiri ka ọ rụọ ọrụ.
Ndewo, enweghị m ngwa i5ls Huawei, ha enweghị mgbọrọgwụ m, enweghị m pc, kedu ka m ga-esi mee ya? Daalụ
Enwere onye gbanyere mkpọrọgwụ ụgbọ ala mgbasa ozi?
Ndewo ... ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka ịtụgharị ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịgbagharị n'ịntanetị na-arịọ maka ụfọdụ data ma m gbalịrị na pp niile dị adị ya framaroot vroot wdg mana achọrọ m ịtụgharị ya na-enweghị pc ... ọ bụ ihe nlere samsung j2 1.0.6 SM-G523M biko achọrọ enyemaka
Ndewo ekele onye nwere ike inyere m aka ịgbanye m sansug SMG 850A android 4.4.4
Olee otu m ga-esi gbanye n'enweghi ngwa? Enwere m ekwentị nke nne m nwụrụ na enweghị m ike were akaụntụ google ya n'ihi na amaghị m ebe ọ hapụrụ paswọọdụ, yana ebe m na-enweghị ike ịchọta akwụkwọ ahụ, enweghị m nkwa ọ bụla. Ọ bụ TCL t766h. Daalụ nke ukwuu
Ọnụahịa nke Moto G5S na Moto G5S Plus na Europe na-edozi